May 2021 - SonSon LinLin
အမျိုးသမီး အဖြစ်မှ အမျိုးသားအဖြစ်သို့ ရောက် လို ဖြစ်စေ လိုလျှင်
May 31, 2021 sonsonlinlin 0
အမျိုးသမီး အဖြစ်မှ အမျိုးသားအဖြစ်သို့ ရောက် လို ဖြစ်စေ လိုလျှင် အမျိုးသမီး များ….. နောင်​ဘဝအမျိုးသားများဖြစ်​ရန်​ လိုက်နာကျင့်ကြံရမည့်တရားများမှာ – (၁) ရတနာသုံးပါးတို့၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ (၂) ငါးပါးသီလကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း၊ (၃) အမျိုးသမီးအဖြစ်၊ မိန်းမအဖြစ်ကို မနှစ်သက်ခြင်း၊ (၄) အမျိုးသားအဖြစ်၊ ယောကျာင်္းအဖြစ်ကို နှစ်သက်ခြင်း၊ ဟူသော တရားလေးပါးကို လိုက်နာကျင့်ကြံရမည်။ ရတနာသုံးပါး ကြည်ညိုရမည်ဟု ဆိုရာတွင် ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ်တော် […]
ဝက်ခြံနဲ့အမည်းစက် လျော့ပါးပြီး အသားအရေတောက်ပလာစေရန် ငှက်ပျောသီးက အရသာရှိပြီး စားကောင်းသလို သင့်အသားအရေအတွက်လည်း သုံးတတ်မယ်ဆိုရင် အရသာရှိဦးမယ့် အသီးတစ်မျိုးပါပဲ။ သင်က အိမ်မှာနေရင်း ဝက်ခြံတွေ အမည်းစက်တွေ လျော့ပါးပြီး အသားအရေကြည်လင်တောက်ပချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ငှက်ပျောသီး Face Mask အမျိုးအစားတွေကို ကိုယ့် ရည်ရွယ်ချက်အလိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ဝက်ခြံသက်သာချင်သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့- ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီး နှစ်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ တစ်ဇွန်း သံပယိုရည် ဇွန်းဝက် ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို […]
ေရခဲႏွင့္ မ်က္ႏွာကို ပြတ္ရင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး ၆ ခု
ရေခဲနှင့် မျက်နှာကို ပွတ်ရင် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူး ၆ ခု မျက်နှာကို ကုသပုံ ကုသနည်း အမျိုးမျိုး ရှိသည် အနက်မှ ဒီတစ်ခါ မှာတော့ ရေခဲဖြင့်ကုသနည်းလေးကို တင်ပြေ ပး လိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးဟာ လူတိုင်းလည်းအလွယ်တကူ လုပ်နိုင်ပြီး အချိန်နှင့် ငွေလည်း များစွာ မကုန်စေတဲ့ နည်းလေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တာ ကတော့ ရေခဲတုံးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အသားအရည်ကို ကြည်လင်စေနိုင်ပါတယ် ရေခဲတုံးဖြင့် […]
၀က်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းအောင် (၁)မျက်နှာသစ်ပါ ၀က်ခြံဖြစ်တဲ့ အသားအရေဟာ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မနက်(အိပ်ရာထ မဟုတ်ပါ)ကျောင်းမသွားခင်၊ရုံးမသွားခင် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ ညအိပ်ရာ ၀င်ခါနီးတစ်ကြိမ် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ (၂)အာလူးသုံးပါ အာလူးကို အကွင်းလေးတွေလှီးပါ။သို့မဟုတ် ချေလိုက်ပါ။ပြီးရင် အမာရွတ်တွေကို အုပ်ထားပါ။ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာရင် ခွာပြီးမျက်နှာသစ်ပါ။တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပေးရင် ၀က်ခြံအမာရွတ်မှ မဟုတ်ပဲ အခြားအမာရွတ်တွေပ် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ (၃)ဗီတာမင် စီ မှီဝဲပါ။ အရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သံပရာသီးတစ်နေ့တစ်လုံးကို ဒီတိုင်းပဲစားစား၊ဖျော်ရည်ပဲလုပ်သောက်သောက် တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ပေးရပါမယ်။ အလုပ်များတယ်ဆိုရင်တော့ […]
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ပျားရည်တစ်ဇွန်းစားပေးခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၇)မျိုး ပျားရည်လို့ ပြောလိုက်ရင် အသား အရေ လှစေတဲ့ ၊ အလှအပ အတွက် အရမ်း အသုံးဝင်တဲ့ အရာလို့ လူတွေက သိ ကြ ပါ တယ် ။ ဒါပေ မယ့် ပျားရည် မှာ တခြား အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရှိပါ သေးတယ် ။ အိပ်ရာ ဝင်ခါနီးတိုင်းမှာ ပျားရည်ကို […]
လူတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားရင် အံ့လည်း မသြပါနဲ့ ၊ဝမ်းလည်းမနည်းပါနဲ့ စိတ်လည်းမနာပါနဲ့ ၊အပြစ်လည်း မတင်ပါနဲ့ အရာရာဟာ …စက္ကန့်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတယ်… ပြောင်းလဲနေတဲ့ သဘောကိုသိလည်း သိတယ်… နားလည်း နားလည်တယ်… ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူရဲ့ အပြစ် မဟုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲခြင်း သဘောကို သိပြီး မပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သင်ကသာ အပြစ်ရှိတာပါ ဘဝမှာ …. တန်ဖိုးထားရမဲ့သူ တချို့ရှိတယ် မေ့ပစ်ရမဲ့သူ တချို့ရှိတယ် တန်ဖိုးထားရမဲ့သူကို မေ့နေပြီး မေ့ပစ်ရမဲ့သူအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ […]
အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများအတွက် ငုံးဥ ယတြာ
အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများအတွက် ငုံးဥ ယတြာ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေစေရန် အစီရင် အချစ်ဝင်ရင် အပြစ်မမြင်ပေမယ့် အချစ်မဝင်တော့လို့ အပြစ်မြင်လာတဲ့အိမ်ထောင်ဘက်တွေက နားလည်မှူ့လွွှဲပြီ စွန့်ခွါသွားတာ လမ်းခွဲသွားတာတွေကြောင့် စိတ်ညစ်စိတ်သောကရောက်နေရသူ အိမ်ထောင်ရှင်တွေ……အတွက် ရုပ်ခံနဲ့ အဟုတ်ကြံနေတဲ့ စနိုက်ကြော်မတွေရဲ့မြူ ဆွယ်မှုကြောင့် မိမိအပေါ်အချစ်ပေါ့ပြီ အပြစ်မြင်လာလို့ စွန့်ခွါ ပစ်ထားခံရသူတွေ… မိမိချစ်သူရဲ့အချစ်ကိုယုံ ဘ ဝကိုပုံပေးခဲ့ပြီမှ ပစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ အနင်းချေခံပန်းတပွင့်ဖြစ်နေလို့ အချစ်သောက မျက်ရည်ပင်လယ် ဝေနေရသူတွေ… အချစ်မဝင်လို့အပြစ်မြင်ပြီး အပြင်မှာသာယာမှူ့ရှာ […]
သင္ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ ဒီနည္းလမ္း (၄)ခုပဲ လုပ္ပါ….
သင်ချမ်းသာချင်လျှင် ဒီနည်းလမ်း (၄)ခုပဲ လုပ်ပါ…. လူတစ်ယောက်ကို ချမ်းသာလာစေမယ့် အကျင့် (၄) မျိုး လူတစ်ယောက်ကို ချမ်းသာလာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာဟာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်ချိန်ဇယားထဲမှာ ရှိပါတယ်နော်။ အဲတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို အကောင်းဘက်ရောက်အောင် အမြဲပဲ တွန်းပို့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ လူတစ်ယောက်ကို ချမ်းသာစေနိုင်မယ့် အကျင့်တစ်ချို့အကြောင်း ပြောသွားမှာပါ။ ဒီအချက်လေးနေ သိသွားရင် သင့်ရဲ့ ဘဝ တိုးတက်အောင် ပထောက်ပံ့ ပေးနိုင်မှာပါနော်။ […]
ခံတွင်းနံ့ ကြောင့် စိတ်ညစ်လျှင်
ခံတွင်းနံ့ ကြောင့် စိတ်ညစ်လျှင် ခံတွင်းအနံ့ ခံတွင်းပုတ်အနံ့သည် လူတယောက်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မူ့မဲ့စေပါသည် . ခံတွ င်းအနံ့ မကောင်းသူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြောဆိုရာတွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌ တောရကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သောရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည် ။ ထိုရဟန်းသည် […]